इलस्ट्रेटरमा ब्रश प्रयोग गर्नका लागि सम्भाव्यता र प्रेरणा क्रिएटिव अनलाइन
इलस्ट्रेटरमा ब्रशको सम्भावनाहरू अनन्त छन्। हामी यस उपकरणको साथ आश्चर्यजनक शक्तिशाली भेक्टर चित्रण गर्न सक्छौं। विशेष उपयोगिताको क्षमता यो छ कि इलस्ट्रेटरले हामीलाई कुनै पनि भेक्टर निर्माणबाट आफ्नै ब्रशहरू सिर्जना गर्न दिन्छ।
अण्डाकार प्रयोग गरेर हामी हाम्रो भेक्टर चित्रणको लागि धेरै नै आधारभूत ब्रश सिर्जना गर्न जाँदैछौं। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने भनेको सानो आकारको इलिप्स बनाउनु हो र त्यसपछि यसलाई नयाँ आर्ट ब्रशमा रूपान्तरण गरी इलिप्स उपकरण (L).
एक पटक सिर्जना गरियो, र चयन गरिएपछि, हामी ब्रशेस सेक्सनमा जानुपर्नेछ र चयन गर्नुपर्नेछ नयाँ ब्रश ब्रुस बाकसको बाँया तल्लो मार्जिनमा फोल्डो कुनाको साथ फोलियो आकारको आइकनमा।
अर्को हामीले कला ब्रश छान्नु पर्छ यदि हामी के चाहन्छौं, जस्तो हाम्रो केसमा यससँग चित्रण गर्नु पर्छ।
अर्को विन्डोमा हामी ब्रश कन्फिगर गर्न सक्छौं। हामी चौडाई स्थिर र विकल्पको साथ छोड्दैछौं स्ट्रोकको लम्बाइ फिट गर्न तन्काउनुहोस् चयनित।
एक पटक ब्रश बनाइसकेपछि, हामी उदाहरणका लागि यसलाई पशुको सिल्हूटमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, निम्न छविमा भएको जस्तो र यसलाई गहिराई दिन।
हाम्रो ब्रशको साथ स्ट्रोकहरू सृजना गर्दै जत्तिकै तिनीहरू जनावरको कपाल हुन्, हामी एक पछि एक सिल्हूटको रातो पृष्ठभूमिमा कालोमा भिन्नता सिर्जना गर्न सक्दछौं। हामी ब्रशको आकार बदल्न सक्दछौं ताकि सिर्जना गरिएको स्ट्रोक बढी वा कम ठीक छ।
अर्को हामी सिल्युट भन्दा फिक्का रातो रातो ब्रशमा गर्न सक्छौं, ताकि भिन्नताले गहिराई सिर्जना गर्दछ।
र अन्तमा, हामीले भर्खरको आँखालाई सुन्तलाको केहि थोरै टचहरू दिनुहोस् जसमा उनीहरू अझ जीवित देखिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » इलस्ट्रेटरमा ब्रश क्षमताहरू
मलाई लाग्छ कि यो ठूलो छ कि उनीहरूले कार्यक्रमसँग कसरी कुराकानी गर्ने निर्देशनहरू दिन्छन्
Sheyla लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ दिन ??
मँ छवि पुन: निर्माण गर्न कोशिस गर्दै छु तपाईंले त्यो छविको साथ गर्नुभईकन तर बाटो फेला पार्न सक्नुहुन्न?
मसँग मेरो-खुट्टे साथीको जस्तै फोटो छ। तपाईं मलाई यो काम गर्न केहि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? कुनै निर्देशनहरू?
मसँग पहिले नै भेक्टर छवि छ, त्यो मात्र। ब्रश चीज मेरो लागि गाह्रो छ।
के म यसको कदर गर्दछु?